ကိုဩဒိနိတ်: 21°58′30″N 96°5′0″E
လက်ဦးသမိုင်း (၁၈၅၇ မှ ၁၈၈၅)
မန္တလေးမြို့ကို ခရစ်နှစ် ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် (၁၁) ဆက်တွင် ဒဿမ​မြောက် ဖြစ်သော မြန်မာဘုရင် မင်းတုန်းမင်း မှ ရဟန်းရှင်လူအများ ကန့်ကွက်သည့်ကြားမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မန္တလေးသည် ၁၈၈၅ ခုနှစ် သီပေါမင်းလက်ထက် တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ မတိုင်မီ (၁၈၆၀-၁၈၈၅)တွင် နောက်ဆုံး ကျန်ရစ်သည့် လွတ်လပ်သော မြန်မာ့မင်းနေပြည်တော်လည်းဖြစ်သည်။
ကိုလိုနီခေတ် မန္တလေး (၁၈၈၅ မှ ၁၉၄၈)
လက်ရှိ မန္တလေး (၁၉၄၈ မှ ယခု)
၁၉၄၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ရက်တွင် ကေအင်န်ဒီအို ကရင်သောင်းကျန်းသူများနှင့် ကွန်မြူနစ်တပ်များက မန္တလေးမြို့တွင်းသို့ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ပြီး ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။ သောင်းကျန်းသူများကို တပ်မတော်၊ စစ်ရဲနှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများက ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ မန္တလေးမြို့ကြီးသည် တိုက်ပွဲများကြောင့် များစွာ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ကေအင်န်ဒီအိုများသည် ကွန်မြူနစ်တပ်များနှင့် အတူ ၁၉၄၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ရက်မှ ၁၉၄၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၆ရက်အထိ မန္တလေးမြို့ကြီးအား သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း လုယက်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းစသည့် အဖျက်လုပ်ငန်းများကိုသာ ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ကြသည်။
တပါတီ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) အစိုးရ လက်ထက် (၁၉၆၂ - ၁၉၈၈) အတွင်း မန္တလေးမြို့၏ အသွင်အပြင်မှာ ကျဆင်းခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းတွင် အထပ်နှိမ့် အဆောက်အအုံအသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လမ်းမများပေါ်တွင် စက်ဘီးများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိပြီး စက်ဘီးမြို့တော်ဟု နာမည်တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် မေလ တွင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးကြောင့် အိမ် ၆၀၀၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး လူဦးရေ ၃၆၀၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သော ဦးကျားကြီးဝင်း မီးလောင်မှုကြောင့် အိမ် ၂၇၀၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၂၃၀၀၀ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မီးလောင်မှုများသည် မန္တလေးမြို့၏ တိုးတက်မှုကို တုံ့နှေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လောင်ခဲ့သောမီးကြောင့် မန္တလေးမြို့၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ရတနာပုံဈေး တစ်ခုလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ နောက်ထပ် အကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးဖြစ်သည်။ အိမ် ၃၂၀ ကို လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၁၆၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်၊ သုဓမ္မာဇရပ်များ၊ ပယ်ပုံတော်ဝင်း၊ တဝဂူဘုရား၊ မဟာသကျသီဟ ရုပ်ပွားတော်၊
မဟာအတုလဝေယန်ကျောင်းတော်ကြီး၊ အိမ်တော်ရာဘုရား၊ ကျောက်တော်ကြီးဘုရား(မန္တလေး)၊ ကုသိုလ်တော်၊ စန္ဒာမုနိ၊ ရန်ကင်းတောင်၊ ရေတံခွန်တောင်၊ ရွှေစာရံဘုရား၊ မန္တလေးယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်၊ အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတော၊ ရတနာပုံ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၊ မန်းသီတာ ဥယျာဉ် နှင့် အောင်ပင်လယ်ကန် တို့ရှိသည်။
"Water Purification Plant No. 8 in Aungmyethazan Township 60% Coomplete" (in Burmese) (28 April 2011). Eleven Media Group.
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး။ 1 August 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
United Nations World Urbanization Prospects, 2007 revision။ The United Nations Population Division။ 18 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 January 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Zon Pann Pwint, Minh Zaw and Khin Su Wai (18–24 May 2009). "Mandalay marks 150th birthday". Archived2June 2009 at the Wayback Machine.
Myanmar Area Codes။ 1 December 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 1 January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 January 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
See also nearby Pyin Oo Lwin, the historic hill station above Mandalay Archived4August 2009 at the Wayback Machine.
Mandalay Centenary Song by Than Myat Soe Archived 18 February 2012 at the Wayback Machine. MRTV3